बुधबार दोहोरो अंकले घटेको सेयर बजार बिहीबार भने झिनो अंकले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८४ बिन्दुले बढेर एक हजार ११३ दशमलव ०७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक शून्य दशमलव २७ बिन्दुले बढेर २३६ दशमलव ६० बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कुल १५५ कम्पनीको चार लाख ७५ हजार ७६६ कित्ता सेयर रु. १६ करोड ४४ लाख ७८ हजार ६८८ मूल्यमा खरिद–बिक्री भए ।
कारोबार भएका १० उपसमूहमध्ये आज तीन उपसमूहको सेयर घटेका छन् भने सात उपसमूहको सेयर वृद्धि भएको छ । जलविद्युत १ दशमलव ०७, उत्पादन १२.८ र लघुवित्त २.५८ बिन्दुले घटेका छन् । यस्तै बैंकिङ १ दशमलव ३२, व्यापार २ दशमलव ७, विकास बैंक शून्य दशमलव ०२, वित्त शून्य दशमलव ७८, निर्जीवन बिमा १० दशमलव ०४, अन्य १ दशमलव ३१ र जीवन बिमा १ दशमलव ७८ बिन्दुले बढेको छ ।
झिनो अंकले बढेको बजारमा चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले आज पनि ९ दशमलव ८७ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स २ दशमलव ८५, बोमी माइक्रोफाइनान्सका सेयरधनीले २ दशमलव ८४ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
यस्तै बिहीबार हिमालयन डिस्ट्रिलरीका सेयरधनीले ३ दशमलव ९०, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ३ दशमलव ४९, सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले २ दशमलव ५२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
कारोबार रकमका आधारमा चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्रै रु. दुई करोड ५० लाख ६८ हजार १९१, नबिल बैंकको रु. एक करोड ३९ लाख ४३ हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रु. ८६ लाख ९८ हजार ६२० बराबरको कारोबार भएको स्टकले जनाएको छ ।